PM Draghi: Talyaanigu wuxuu dib u furay natiijada talaalada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Talyaaniga » PM Draghi: Talyaanigu wuxuu dib u furay natiijada talaalada
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Talyaaniga • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Dib u furitaankii Talyaaniga
Raiisel wasaare Mario Draghi wuxuu qabtay shir jaraa'id oo toos ah si uu u muujiyo go'aanka "Ganacsiga, Shaqada, Dhalinyarada iyo Caafimaadka" wuxuuna ka hadlay dib u furista Talyaaniga.
Wasiirka Dhaqaalaha iyo Maaliyadda ee Talyaaniga, Daniele Franco, iyo Wasiirka Shaqada, Andrea Orlando, ayaa iyaguna goobjoog ka ahaa shirka jaraa’id.
Wareegtadan ayaa ka duwan kuwii hore maxaa yeelay waxay eegaysaa mustaqbalka RW.
Waa inaan ka adkaanaa aafada si aan usoo nooleyno dhaqaalaha Ra'iisul Wasaare Draghi ayaa carabka ku adkeeyay.
Dib-u-fureynta ayaa inta badan ka dhalatay tallaalada. Saadka ayaa sifiican usocda hadiiba ay jirto hal shay oo aan ku faano, waa mudnaanta lasiiyo maadooyinka ugu jilicsan. Laba bilood ka hor waxay ahayd qaybta ugu yar ee laga tallaalay 70 ilaa 79 sano, maanta waxay gaartay boqolkiiba 80. ”
PM Draghi wuxuu sidaa ku sheegay shirkii jaraa'id si uu u soo bandhigo Sostegno (taageero dhaqaale) bis, oo ay ansixiyeen Golaha Wasiirada. Wareegtadan, ayuu carabka ku adkeeyay, "way ka duwan tahay kuwii hore maxaa yeelay waxay eegaysaa mustaqbalka iyo dalka dib u furaya laakiin cidna ugama harin. Way caawinaysaa wayna caawinaysaa. ”
Eeg mustaqbalka kalsooni leh
"Waxaan waa inuu ka adkaadaa aafada si loo soo nooleeyo dhaqaalaha. Taageerada ugu fiican ayaa ah dib ufurashada howlaha. Waxaan rajeyneynaa horumar horayba rubuca soo socda. Xitaa haddii ay weli tahay xilli hore in laga hadlo koritaanka joogtada ah - tan waxaan u baahan doonnaa PNNR, ”ayuu yiri Draghi. Taasi waa Qorshaha Soo-kabashada ee uu Draghi ku xaqiijiyay "in uusan jirin gaabis iyo waqtiga soo dhaafay ay ahayd lagama maarmaan in wax laga qabto kakanaanta."